I-Semalt icebisa isiKhokelo se-Google Analytics Kubaqalayo
Ukuba enye yezixhobo eziphezulu-phambili ezikunceda ukulinganisa inkqubela phambili yezoshishino, iimpembelelo zeGoogle Analytics kwi Injini yosesho Ukulungiswa akunakunqandwa. I-Google Analytics yenye yezona zixhobo ezigqwesileyo eziphucula ukusebenza kwakho kwiwebhusayithi ye-intanethi, inani leendwendwe kwiziko lakho, kunye neerhafu zokuhlawula indawo.
Ukufezekisa uhlobo olulungileyo lwezithuthi ye-SEO campaign kunye nokucoca i-bots kunye nezithuthi zangaphakathi akunakugxininiswa kakuhle. Njengokuqala, ukuqonda ze-SEO ezisiseko kunye nendlela yokucoca i-traffic engafunekiyo kwi-skewing ingxelo zakho ze-Google Analytics ibaluleke kakhulu.
Nazi izikhokelo ezilula ezivela ku-Igor Gamanenko, uMphathi weNtengo kaMthengi we-18 (Semalt , ukukunceda uqonde i-Google Analytics ngokupheleleyo.
Imigomo ye-Google Analytics
Xa kuziwa kwi-Google Analytics, imfuno yokuqonda imigaqo eyisiseko ayikwazi ukugxininiswa kakuhle. Ngokomzekelo, kucetyiswa ukuba ulandele iinkqubo ezifanelekileyo xa ufaka ikhowudi ye-Google Analytics kwiwebhusayithi yakho ukuphepha ukulahlekelwa ulwazi oluxabisekileyo. Kule titshala, amaxabiso, ukutyelela, kunye neendwendwe ezizodwa ziya kuchazwa ukunceda abaqalayo ukuba baqonde i-Google Analytics..
I-Google Analytics Tracking Code
Ukuhlaba ityala lakho ekujoliswe kuyo kukuthetha kakhulu xa kuziwa kwi-Intanethi yokuSebenza kweeNjini. Ikhowudi yokulandelela ye-Google Analytics idlala indima ebalulekileyo ekuncediseni abacebisi bokuthengisa okanye abaphathi bewebhusayithi balinganise iiphulo zabo. Ukulandelela phantsi apho iindwendwe zakho ezizodwa zivela kwiinkxaso zoshishino ukuphucula amava abo kwi-intanethi ukukhuthaza ukubandakanya komsebenzisi nokuqhuba i-website efanelekileyo yezithuthi.
Ukuze ube nephulo elifanelekileyo, ekugqibeleni, cinga ukubeka iinjongo zakho kwi-Google Analytics kwaye ulandele rhoqo. Umkhankaso osebenzayo we-SEO ungaphunyezwa ngokusebenzisa umdlalo wesihloko kwiwebhusayithi yakho kwaye ungabandakanyi i-bots kwiingxelo ze-GA.
Ukulandelela phantsi kwiiwebhsayithi iziganeko usebenzisa i-GA
I-Google Analytics iyithuluzi elikhethekileyo elinceda abacebisi bokuthengisa ukulandelela izenzakalo ezenzekayo kumkhankaso. Ukwazi apho ubuchule bakho buvela khona abukwazi ukucinywa xa kuziwa ekuthengiseni i-intanethi. I-Google Analytics ibeka abanikazi bewebhusayithi kwindawo engcono yokubamba ingqalelo kwiindwendwe ngokuqonda ukuthanda kwabo kunye nokukhethwa kwazo ngokusebenzisa ukulinganisa kwamazinga.
I-Take yeGoogle Analytics kwizikhonkco eziphumayo
Ukuqonda ukuba yonke i-website ixhomekeke kwizikhonkco eziphumayo ziya kukubeka kwindawo efanelekileyo yokuqhuba ukuSebenza kweeNjini zoPhando. Ukuthumela umxholo omtsha neyayimvelaphi kwiwebhusayithi yakho kubaluleke kakhulu xa kuziwa ukuthengiswa kokuqukethwe . Sebenzisa amaqhosha aphumayo ukubetha i-market target yakho kwaye ufikelele kwindlela yangempela. Ukuqala, kucetyiswa ukuba uqonde indlela yokusebenzisa izixhumanisi eziphumayo nendlela yokuzibonisa kwi-Google Analytics yakho.
Ngaba wakha wacinga ngokulinganisa indlela abasebenzi bakho abasebenzisana ngayo nabakhenkethi nabasebenzisi bakho? Ukubetha abaphulaphuli bakho ekujoliswe kuyo ngexesha langempela kuquka ukuzimisela kunye nemizamo eyongezelelweyo. Kukhutshwe amanqaku amanqaku ngokuxoxa ngendlela idatha engafunekiyo ingabandakanywa ngayo kwiData ye-Google Analytics. Musa ukuvumela abagaxekile ukuba bathathe i-website yakho. Yiya kwisikhokelo se-Star Analytics sokuqala ukuba ube nolwazi olunzulu malunga nendlela esebenza ngayo.